Maninona No Hiandry? Voatondron’ny FWikipedia sy Google Tsy Nahy ho Mpandresy ny Fifidianana Filoham-Pirenena Amin’ny Volana Martsa 2018 i Poutine. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Febroary 2018 1:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, русский, Português, Türkçe, polski, македонски, Italiano, Esperanto , English
Voatondron'ny Google tsy nahy ho mpandresy amin'ny fifidianana filoham-pirenena 2018 i Poutine // Sary nopihan'i Christopher Moldes.
Afaka roa volana no hatao ny fifidianana filoham-pirenena ao Rosia, ary na dia misy kandidà maromaro aza, dia andrasana hahazo mora foana fepotoana hiasàna faninefatra i Vladimir Poutine.
Tamin'ny 15 Janoary, tao anatin'izay heverina ho ezaka tsy handaniana fotoana sy hialàna amin'ny fanisàna ireo vato mandritry ny alin'ny fifidianana, nanambara an'i Poutine ho mpandresy amin'ny fifidiana amin'ny volana Martsa 2018 ny Google.
Nanome ilay sary mahazatra avy amin'ny lahatsoratra Wikipedia ny fitadiavana hoe “fifidianana 2018″ amin'ny teny Rosiana ao amin'ny Google. Eo ambanin'ny “mpandresy”, mipoitra ny sarin'i Vladimir Poutine, araka ny hita etsy ambony.
Avy any amin'ny teknolojia fikarohan'ny Google ity fahadisoana hafahafa ity, izay matetika manasongadina ireo vaovao izay voatokana hamaly ny fangatahan'ireo mpampiasa. Amin'ny fikarohana toy ity, ny vaovao matetika dia avy any amin'ny Wikipedia na tranonkala ofisialin'ny Governemanta izay inoan'ny Google fa azo ianteherana.
Amin'ity tranga ity anefa, ilay lahatsoratra momba ny fifidianana 2018 nataon'ny Wikipedia Rosianina dia milaza ny zavatra rehetra afa-tsy…
I Stanislav Kozlovsky, mpitantana ny departemantan'ny Wikimedia ao Rosia, orinasa renin'ny Wikipedia, dia nanazava ny fahadisoana tamin'ny fanehoankevitra tao amin'ny RBC, tranonkala Rosianina momba ny vaovaon'ny fandraharahàna.
Nisy olona nampiditra ny anaran'i Poutine teo amin'ny savaranonandon'ilay lahatsoratra momba ny fifidianana, izay nanondroan'ilay fitaovana fikarohana azy ary naneho ny endrika vaovaon'ilay izy tany amin'ny valin'ny fikarohana.
Fantatra amin'ny modeliny fakàna loharano avy eny ifotony ny Wikipedia, amin'ny alalan'izany ireo mpampiasa mirotsaka an-tsitrapo dia afaka mandray anjara aorian'ny famenoana dingana fifanekena. Na misy aza ny fahasamihafàna eo amin'ny teny, manana fomba mahazatra ireo tranonkala Wikipedia rehetra mba hisorohana ny tsy fahatomombanana toy ity. Hita anefa fa tsy narahina ireo fomba ireo tany amin'ny dikanteny Rosianina amin'ilay pejy. Tsy hay na natao ho toy ny hanihany ilay hadisoana, na toy ny hetsika ara-politika.
Voahitsy tao anatin'ny 20 minitra ilay hadisoana, kanefa betsaka izany fotoana izany mba hamoahana fanehoankevitra mahatsikaiky, toy ity saritsarinteny iray ity:
Nisy niantso an'i Senatera Pushkov. Tamin'ny alalan'ny fampiasana Google, dia nandray anjara tamin'ny fifidianantsika ny Amerikanina, amin'ny fanosehana kandidà izay hahazoan'izy ireo tombony.
Alexey Pushkov, Senatera rosianina iray izay manana toerana ao amin'ny Filankevitry ny Komitin'ny Federasiona ho an'ny Fiarovana sy ny Filaminana, dia fantatra amin'ny bitsika alefany matetika sady maneso ny filazana momba ny fitsabahan'ny Rosia any amin'ny firenena hafa sy ny fanamelohana ny fitsabahan'ireo vahiny (indrindra fa i Etazonia) ao Rosia.
Na tsy eritreretina ho betsaka aza ireo mpampiasa mandray ity ho matotra, manambara olana goavana kokoa ilay tranga.
Miteraka fanontaniana momba ny fomba fanapahan'ny Google hevitra hoe iza ireo loharano azo ianteherana kokoa afaka hasongadina ka heverina fa “hamaly” ireo fanontaniana mipetraka ao amin'ny fikarohana. Na hoe safidy matanjaka noho ny media manan-danja sasany aza ny Wikipedia, dia mbola iharan'ny fahadisoana toy ity foana. Mety manome votoatin-dresaka diso momba ny trangan-javatra ihany koa ireo tranonkala ofisialin'ny governemanta. Mety handrisika ny Google hiverina hihevitra raha mety hamorona olana maro kokoa noho ny famahàna izany ity karazana fanasongadinana ity.
Raha heverina fa hanohy ny famoahana valiny manaraka ity fomba ity ny Google sy ireo fitaovam-pikarohana hafa, dia mampametra-panontaniana ihany koa momba ny fahatokisana ireo sehatra an-tranonkala ilay olana rehefa vaovao sy torhay no resahana. Ny ampahany betsaka amin'ny tanora Rosianina dia mampiasa ny aterineto ho an'ny vaovao, na vitsy an'isa aza izy ireo raha oharina amin'ny vahoaka manontolo, izay mirona kokoa any amin'ny fahitalavitra.
Satria misondrotra ny tahan'ny fidirana aterineto ao Rosia, afaka manantena ny fiakaran'ireo tarehimarika ireo isika. Avy any Brezila, hatrany Indonezia ary hatrany Etazonia, maro dia maro ny olona amin'ny taona rehetra no manomboka, na efa nanomboka nampiasa ny sehatra an-tranonkala ho toy ny loharanom-baovaony sy fakàna torohay. Midika izany fa antenain'ny olona ny fiakaran'ny valina fikarohana, ny fahan'ny tambajotra sosialy sy ireo fitaovana hafa mibaiko tena mba hahazoany vaovao sy hanome antsika vaovao marin-pototra momba ny tontolo manodidina antsika. Raha zavatra mora kely toy ny fahadisoan'ny Wikipedia no afaka miteraka fandisoana vaovao momba ny zavatra iray izay tena manan-danja toy ny ny fifidianana filoham-pirenena, dia mety mbola hisy olana maromaro any aoriana any.
Ho setrin'ireo tohankevitra momba ny filàna miady amin'ny fandisoana vaovao sy “vaovao fako”, ny mpandinika media, Nina Jankowicz dia nanome sosokevitra hoe hiroso amin'ny fomba maharitra isika ary hanosika mba hivoaran'ny saina mahay mandanja/mitsikera an'ireo mpampiasa.
Mety hahomby na tsy hahomby izy io, arakaraky ny misy anao sy ny fomba nampianarina anao hampiasa ny aterineto. Saingy soa ihany ho an'ireo rehetra nahita ity vokatry ny fikarohana ity, tsy nilàna loatra ny saina mahay mandanjalanja ilay izy mba hahitàna hoe tsy inona ilay izy afa-tsy hadisoana goavana.